Gbanwee onwe gi n'ime nkita ohia nke Wolf na ndi na-ekwenye otutu ndi mmadu | Gam akporosis
Egwuregwu ọtụtụ egwuregwu, ma ọ bụ nke a na-akpọ MMO, nwere omume nke ịkpọrọ anyị gabiga akụkọ kachasị anwansi na ọhụụ ebe niile. Ikike nke igwu egwu na ọtụtụ ndị egwuregwu na-awakpo ma ọ bụ ịmalite onwe anyị na nnọchibido nke ụlọ ndị ọzọ anyị nwere ike ịkwakọrọ, na-enwekarị ihe mkpali dị ukwuu, ebe ọ bụ na a na-akpali ya mgbe niile nke ịghara igwu egwu naanị bụrụ akụkụ nke obodo, na nke a, otu ezinụlọ. Egwuregwu nke ụdị a ka ga-abanye na gam akporo, mana enwere ugbua ụfọdụ ndị kwesiri ya mara.
Otu okwu dị otú ahụ bụ The Wolf, otu egwuregwu ọtụtụ egwuregwu na ntanetị nke ị gbanwee wolf na nke ị ga - arụkọ ọrụ na ndị ọzọ egwuregwu n'ụdị anụ ọhịa wolf. A peculiar aha nke Swift Apps LTD bipụtara, nke na-anwa ịnye echiche ndị ọzọ na uche ndị ọzọ, ebe ị nwere ike ịchụ nta anụ ndị ahụ siri ike na ìgwè ehi. O siri ike ịchọta egwuregwu nke ụdị a, anaghị m ekwu ya n'ihi onye ọkpụkpọ egwu ọtụtụ na ntanetị, mana n'ihi na ị nwere ike ịbanye n'ime anụ anụmanụ dịka anụ ọhịa wolf. Nke kachasị, ọ bụ ụwa mepere emepe na-echere gị na nke ị ga-ahụ ọtụtụ ndị egwuregwu na-achọ ịchụ nta anụ ahụ. Ka anyị hụ ihe egwuregwu vidio a na-akpọ Wolf nwere maka anyị nakwa na ọ bụ ihe dị nnọọ iche na ihe anyị ji na gam akporo.
1 Untingchụ nta na nkwado ọtụtụ
2 Njikwa dị mfe maka anụ ọhịa wolf gị
Untingchụ nta na nkwado ọtụtụ
N'ezie, otu n'ime mmetụta kachasị mma bụ zute anụ ọhịa wolf ndị ọzọ ma gaa ịchụ nta soro ha ka mma nkà. Ọbụghị naanị nke a, mana na ihuenyo izizi ị nwere ike ịhọrọ ụdị ụdị anụ ọhịa wolf ị bụ na ọbụlagodi n'onwe ya.
I nwekwara ike hazie stats na nka nke anụ ọhịa wolf kwuru, otu n'ime ha bụ ahụ ike, nchekwa, ọgụ na ọsọ, gbakwunyere ihe ga-abụ osisi nke nka nke na-ekpuchi edemede ndị a: isi (isi ihe ọgụ, mmegharị ahụike, wdg), Aura (na-akwalite ọgụ ma dị oke egwu, mgbe ọnwụ), na Pụrụ iche (akpụkpọ anụ na-egbu egbu, ice spikes, na ndị ọzọ).
Njikwa dị mfe maka anụ ọhịa wolf gị
N'ịbụ n'ihu egwuregwu 3D vidiyo, ọ nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu na mbido, mana nke bụ eziokwu bụ na otu egwuregwu n'azụ egwuregwu a jisiri ike mee ha nke ọma. Have nwere njikwa akara na akuku aka ekpe ala, mwakpo ahụ n'akụkụ aka nri dị ala, gbakwunyere ihe ga-abụ radar, isi ihe ndụ, isi ahụmahụ na ozi ndị ọzọ n'akụkụ ndị ọzọ.
You ga - ezute ọtụtụ ndị egwuregwu n'ụdị anụ ọhịa wolf, yana usoro anụ oriri ndị ị ga - enweta n'etiti egwuregwu ị nwere ike ịchọta. rabbits, raccoons, mgbada, lynx na otutu ndi ozo enwere ike ichu nta ma gbue maka ihe omuma. Havekwesiri ị atta ntị nke ọma na lynxes na deer, n'ihi na ha ga-alaghachi ọgụ ahụ mgbe ị na-ama ha.
Ihe na-efu bụ na enweghị akụkọ ma ọ bụ atụmatụ a ga - agbaso, ya mere ọ na - elekwasị anya na simulator sandbox. E nwere ihe abụọ egwuregwu ụdịdị nke i nwere ike isonye. Nke mbu bu PvP, bụ ebe ndị egwuregwu nwere ike ihu na bọọlụ bọọlụ. Ebe nke ozo bu imeghe ma nwekwaa nkwekorita nke anyi ga ichu anumanu ozo. Ọnọdụ nke anwụ na-acha na osisi bụ ihe na-echere gị ịga na-achọ anụ ndị ahụ.
Wolf bụ dị n'efu site na Storelọ Ahịa Play. Nwere mgbasa ozi na micropayments; ndị nke ikpeazụ iji bulie nkà ngwa ngwa.
The egwuregwu bụ nnọọ mma si ya oru akụkụ, ọ bụ ezie na wolf na-agba animations dị ugboro ugboro. Varietyfọdụ dịgasị iche iche na ha ga-eme ka ị ghọta nke eziokwu. Otu ihe ahụ na-aga maka gburugburu ebe obibi, ntakịrị ihe adịghị mma, ọ bụ ezie na enwere ike ịghọta ya n'ihi ụwa 3D.
Ihe dị na ya na ọtụtụ egwuregwu na ntanetị
Na-eme nke ọma
Ka ị sonyere anụ ọhịa wolf ndị ọzọ
Gburugburu ya adịghị ezigbo mma
O nweghi otutu ihe dika ichota ezinulo, ndi ozo, ndi ozo ...
Developer: Ngwa ngwa ngwa LTD
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Chụ nta na-alụ ọgụ na The Wolf, a ekwenye na ọtụtụ ebe ị bụ anụ ọhịa wolf
Ndewo, m ga-achọ ịma ma enwere ike igwu egwuregwu a na njikwa, egwuregwu ma ọ bụ ọ joụ.
Site na 5th ọgbọ iPad iOS 13.
Ndewonu Antonio! Anọ m na-enyocha egwuregwu egwuregwu ma ọ nweghị ihe ọ bụla gbasara nkwado njikwa.
Ebumnuche dị oke mma na, yana mmepe, nwere ike ikwe nkwa ọtụtụ !!!
Ninggba ọsọ na ịwụli n'etiti ugwu dị elu adịtụghị jụụ dịka Sky Dancer